Qodobbada aqoonta qaarkood ee neefta dhaliyaha ogsijiinta
Habka shaqada eeneefta dhaliyaha ogsijiintawaxaa dhamaystira kontaroolaha barnaamijka oo koontaroolaya shan laba boos oo shan geesood ah pilot valves solenoid, ka dibna valves-ka solenoid-ka ayaa xakameynaya furitaanka iyo xidhitaanka tobanka tuubooyinka pneumatic siday u kala horreeyaan.Shanta boos ee laba-geesoodka ah ee duuliyaha solenoid-ka ayaa xakameynaya neefsashada bidix, cadaadiska siman iyo neefsashada midig siday u kala horreeyaan.Socodka wakhtiga ee nuugista bidix, cadaadis siman iyo nuugista saxda ah ayaa lagu kaydiyay kantaroolaha barnaamijka.Xaaladda korontada, gaaska duuliyaha ee shanta laba-meelood ee shanta-jid ee duuliyaha solenoid-ka ayaa ku xiran dekedda xiritaanka ee tuubada pneumatic-ka.Marka hawshu ay ku jirto xaalada nuugista bidix, valves-yada solenoid-ka ee xakameynaya nuugista bidix waa la tamarinayaa waxaana gaaska duuliyaha lagu xirayaa albaabada albaabka bidix ee nuugista, valve nuugista bidix iyo tuubada saxda ah si loo furo saddexdan valve oo dhamaystirto. habka nuugista bidix halka munaaradda adsorption midig la qurxiyey.
Taxadarrada hawlgalka iyo isticmaalka matoorada ogsijiinta ee warshadaha.
1. Ku hagaaji waalka hagaajinta ka hor mitirka socodka iyo waalka oksijiinta ka dib mitirka socodka iyadoo loo eegayo cadaadiska hawada iyo mugga hawada.Ha hagaajin heerka socodka socodka si aad u hubiso shaqada caadiga ah ee dhalisa ogsijiinta warshadaha.
2. Furitaanka waalka gelitaanka iyo valve oksijiinta waa inaysan noqon mid aad u weyn si loo hubiyo in nadiifnimadu ay buuxiso shuruudaha.
3. Tuubooyinka ay hagaajiyaan hawlwadeenada shaqada waa in aan loo rogin siday rabaan si looga fogaado in ay saameeyaan nadiifnimada.
4. Ha dhaqaajin qalabka korantada ee ku jira guddida koontaroolka elegtarooniga ah, hana kala furfurin tuubooyinka pneumatic-ka.
5. Hawl-wadeenadu waa in ay si joogto ah u eegaan afarta cabbir ee cadaadiska ee matooriyaha ogsajiinta ee warshadaha oo ay u isticmaalaan isbeddelada cadaadiska sida diiwaannada maalinlaha ah si ay u falanqeeyaan cilladaha qalabka.
6. Si joogto ah u fiirso cadaadiska ka soo baxa, tilmaanta mitirka socodka iyo nadiifnimada oksijiinta si aad u barbar dhigto qiyamka bogga waxqabadka iyo xalinta dhibaatooyinka wakhtiga.
7. Ilaali kombaresarada, qalajiyaha hawada iyo shaandhaynta dhalisa oksijiinta warshadaha sida waafaqsan shuruudaha farsamada si loo hubiyo tayada hawada.Compressor-ka iyo qalajiyaha hawada waa in la baaraa ugu yaraan dhowr jeer sanadkii, qaybaha xirashadana waa in la beddelaa si waafaqsan xeerarka dayactirka qalabka, xubinta shaandhada u baahan in la hagaajiyo waa in isla markiiba la beddelaa.
8. Marka qalabka dib-u-habaynta lagu samaynayo, hawada waa in la gooyaa (cabirka cadaadiska haanta gaaska wuxuu muujinayaa eber) oo la gooyaa tamarta dib u habeynta.
9. Buuxi xaashida diiwaanka maalinlaha ah.
Waa maxay xaalada shaqada caadiga ah ee dhalisa ogsijiinta warshadaha?
1. Iftiinka korantadu waa shidan yahay, nuugista bidixda, cadaadis siman iyo tilmaame nuugista saxda ah ayaa u iftiimaya si wareeg ah, taas oo muujinaysa habka samaynta ogsijiinta.
2. Marka iftiinka tusiyaha bidix ee nuugistaneefta dhaliyaha ogsijiintawaa daaran yahay, cadaadiska taawarka xayaysiinta bidix wuxuu si tartiib tartiib ah uga kacaa cadaadiska dheellitirka ilaa sare marka cadaadiska la simo, halka cadaadiska taawarka saxda ah uu si tartiib tartiib ah ugu dhaco eber cadaadiska dheellitirka marka cadaadiska la simo.Marka tilmaame isleeggu shido, cadaadiska bidix iyo midig ee munaaradaha xayeysiinta ayaa si tartiib tartiib ah u gaari doona dheelitirka mid kor iyo hoos.
3. Marka uu shido tusaha nuugista saxda ah, cadaadiska taawarka saxda ah wuxuu si tartiib tartiib ah uga soo kacaa cadaadiska dheellitirka oo kor u kaca marka cadaadiska la simo, halka cadaadiska taawarka bidix uu si tartiib tartiib ah hoos ugu dhaco cadaadiska dheellitirka ilaa eber marka cadaadiska waa la siman yahay.4. Cadaadiska hawada oksijiinta ayaa tilmaamaya in cadaadiska gaasku uu yahay mid caadi ah, cadaadiskuna wax yar ayuu isbeddeli doonaa inta lagu jiro isticmaalka, laakiin isbeddelku waa inuusan noqon mid aad u weyn.
5. Tilmaamaha socodka mitirka socodka ee koronto-dhaliyaha oksijiinta warshadaha waa in uu ahaado mid xasiloon, iyo isbeddelku waa inuusan noqon mid aad u weyn.Qiimaha tilmaanta ee mitirka socodka waa in aanu ka weynaan soosaarka gaasta ee la qiimeeyay ee qalabka ogsijiinta.
6. Qiimaha tilmaanta mitirka ogsijiinta ee dhalisa ogsijiinta warshadaha waa in aanu ka yarayn nadiifnimada la qiimeeyay ee qalabka oksijiinta, waxaana laga yaabaa in wax yar isbedbedesho, laakiin isbedbedelku waa inaanu noqon mid aad u weyn.
Waqtiga boostada: Feb-09-2022